बाख्रा बलात्कार गर्दागर्दै रंगेहात पक्रिएपछि… – Palpa Samachar
बाख्रा बलात्कार गर्दागर्दै रंगेहात पक्रिएपछि…
आफूले बाख्रासँग यौनकार्य गर्नका लागि अनुमति लिएको दाबी ती युवकले गरेपछि सुन्नेहरु तीनछक परे । यद्यपि उनको दाबी सही थिएन । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो । यो अनौठो घटना अफ्रिकी मुलुक मलावीको मचिन्जी भन्ने ठाउँको हो । उक्त गाउँका केनेडी कम्बानी नामका एकजना युवकलाई बाख्रासँग करणी गर्दै गर्दा पक्राउ गरिएको थियो । पक्राउ परेपछि मानिसहरुले किन बाख्रामाथि त्यस्तो कार्य गरेको ? भनेर सोध्दा कम्बानीले बाख्रामाथि बलात्कार गर्न आफूले अनुमति लिएको बताए ।
फुटबल छाड्ने सोचमा थिए बुफोन !
मारुनी नाचको खानी पाल्पाको फोक्सिङ्गकोट